कसरी यी प्रोग्रामहरूसँग फोटोबाट वाटरमार्क हटाउने ग्याजेट समाचार
इन्टर्नेट छविहरु को पूर्ण छ, गुगल मा जानुहोस् लगभग सबै खोज को तस्वीरहरु खोज्न, सबै नि: शुल्क। तर हामीले इन्टरनेटमा देखेका केही चीजहरूको मालिक हुन्छ, छवि को मामला मा यो पहिचान गर्न सजिलो हुन्छ जब मालिकले यसलाई उसको हो भनेर सम्झिन्छ, किनकि त्यस छविमा सामान्यतया एक ब्रान्ड हुन्छ। यी मार्कहरू प्राय: कुनामा एउटा सानो लोगो हुन्छ जुन फोटोको सम्पादकले स्पष्ट पार्छ र यो हस्तक्षेपात्मक हुँदैन, सामग्री नायकको रूपमा छोड्छ।
यो सँधै केस हुँदैन, कहिलेकाँही हामी यो लोगो छवि भर धमिलो पाउन सक्दछौं, पृष्ठभूमिमा रहन्छ तर एकदम स्पष्ट हुन्छ। यो सामान्य अभ्यास हो यदि यदि हामीले यो छविलाई अर्को व्यक्तिले प्रयोग गर्नु हुँदैन भनेर विचार गर्‍यौं भने। यो त्यस्तो चीज हो जसलाई सम्मान गर्नुपर्दछ किनकि यसले स author्केत गर्दछ कि यसको लेखक अर्को द्वारा प्रकाशित छवि देखी अति खुशी हुनेछैन। कहिलेकाँही यो सम्पादन प्रोग्रामहरू आफै हुन् वा केही मोबाइलहरूको क्यामेरा अनुप्रयोग जसले तिनीहरूको वाटरमार्क छोड्दछ, हामी सजिलै यसलाई केहि प्रोग्रामहरू वा वेब अनुप्रयोगहरूको साथ हटाउन सक्छौं। यस लेखमा हामी कसरी फोटोमा वाटरमार्क हटाउने भन्ने कुरा देखाउँदैछौं।
1 के फोटोमा वाटरमार्क हटाउन कानूनी छ?
2 वाटरमार्क हटाउने
3 फोटो टिकट हटाउने
के फोटोमा वाटरमार्क हटाउन कानूनी छ?
यदि फोटो तपाईंको सम्पत्ति हो र तपाईं केवल प्रोग्राम वा क्यामेरा अनुप्रयोगले रोपेको वाटरमार्क हटाउन चाहनुहुन्छ भने, यो पूर्ण रूपमा कानूनी हो। यी वाटरमार्कहरू यी एप्लिकेसनहरूका विकासकर्ताहरू मार्फत लागू हुन्छन् कुनै न कुनै रूपमा हाम्रो प्रत्येक तस्विरमा गोप्य विज्ञापन लुक्न, कुनै चीज अचेस्थेटिक र नराम्रो स्वादमा। यो ध्यान राख्नु महत्त्वपूर्ण छ कि यी वाटरमार्कहरू मध्ये धेरैलाई केवल ती अनुप्रयोगहरूको सेटि intoहरूमा खोजी गरेर हटाउन सकिन्छ।
यदि यसको विपरित रूपमा, छवि इन्टरनेटबाट हो र वाटरमार्क एक मध्यम वा व्यक्तिबाट छ, हामी त्यो वाटरमार्क हटाउन सक्दछौं यदि हामी त्यो छविलाई व्यक्तिगत तरिकामा प्रयोग गर्न चाहान्छौं, तर यदि हामी चाहानुहुन्छ भने फाइदा लिनका लागि हो। यसको प्रयोग गरेर, यदि हामीसँग कानुनी मुद्दाहरू हुनसक्दछन्, यदि लेखक चाहानुहुन्छ। तस्विर लिनु र त्यसपछिको सम्पादन एउटा कार्य हो जुन सबैले दिन चाहँदैन।
सम्भावित कानुनी परिणामहरूको बारेमा एकचोटि चेतावनी दिइसकेपछि, हामी ती कार्यक्रमहरू प्रयोग गर्ने वा कुन वेबसाइटहरू प्रयोग गर्ने ती कष्टप्रद र भद्दा वाटरमार्कहरूलाई हटाउनको लागि हेर्नेछौं जुन विवेकी भए पनि, राम्रो फोटो बिगार्छ।
यस कार्यको लागि आदर्श कार्यक्रम, कुनै श doubt्का बिना यो वाटरमार्क रिमूभर हो। यसमा सबै आवश्यक उपकरणहरू मेटाउन वा ब्लर गर्न हामी सबै छविहरू जुन हामी छविबाट चाहन्छौं, वाटरमार्कदेखि अपूर्णताहरू जुन हामी हेर्न चाहँदैनौं। यो पनि धेरै साधारण तरीकाले गरिन्छ, त्यसैले फोटो सम्पादन वा प्रोग्रामिंगको बारेमा उन्नत ज्ञान हुनु आवश्यक छैन।
यो कार्यक्रम नि: शुल्क हो र कुनै स्थापनाको आवश्यक पर्दैन, हामी केवल वेबमा पहुँच गर्छौं र सुरू गर्दछौं, यहाँ कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने बारे केही निर्देशनहरू:
हामी छवि खोल्छौं मा कार्यक्रम को माध्यम बाट "छवि वाटरमार्क"।
हामी ब्रान्ड भएको क्षेत्र मार्क गर्दछौं वा कलात्मक जुन हामी हटाउन चाहन्छौं।
हामी फेला पार्छौं र विकल्पमा क्लिक गर्दछौं "मा बदलिनु"
तयार, हामी हाम्रो वाटरमार्क हटाउनेछौं।
फोटो टिकट हटाउने
यस कार्यको लागि अर्को धेरै राम्रो कार्यक्रम निस्सन्देह फोटो स्ट्याम्प रिमूभर हो, यदि हामी कम्प्युटरसँग धेरै कुशल छैनौं भने पनि प्रयोग गर्न सजिलो प्रोग्राम। कार्यक्रम विशेष रूपमा यो कार्यको लागि डिजाइन गरिएको हो, त्यसैले हामीले वाटरमार्क हटाउनका लागि फेला पार्ने उपकरणहरू धेरै विविध र प्रभावशाली छन्। अघिल्लो अनुप्रयोग भन्दा फरक, यो एक हाम्रो कम्प्युटरमा स्थापित भएको हुनुपर्दछ, त्यसैले हामीले यसलाई पहिले डाउनलोड गर्नुपर्नेछ। हामी केहि विस्तृत चरणहरूमा वाटरमार्क हटाउने विस्तृत विवरणहरू:
हामी अनुप्रयोग खोल्छौं र «फाइल थप्नुहोस् on मा क्लिक गर्नुहोस्। तस्बिर चयन गर्नका लागि हामी सम्पादन गर्न चाहान्छौं।
एक पटक छवि लोड भएपछि, हामी अनुप्रयोगको दायाँ प्यानलमा जान्छौं र विकल्पमा क्लिक गर्दछौं "आयताकार" उपकरण अनुभागमा।
अब एक्लो हामीले वाटरमार्क अवस्थित क्षेत्र छनौट गर्नुपर्नेछ जुन हामी हटाउन चाहन्छौं र रातो र aroundको वरिपरि पारदर्शी आयत सिर्जना हुनेछ, यो याद राख्नुपर्दछ कि यो बक्स चिह्नमा भएको जति कठोर छ, परिणाम राम्रो हुनेछ।
विकल्पमा क्लिक गर्नुहोस् "मोड हटाउने" र विकल्पमा क्लिक गर्नुहोस् "Inpainting" मेनुको जुन हामी प्रदर्शन गर्छौं।
अब हामीले केवल विकल्पमा क्लिक गर्नुपर्नेछ "हलचल" र वाटरमार्क संस्करणको अन्त्य गरेर, पूर्ण रूपमा हटाइनेछ।
अन्तमा छवि बचत गर्न, यसमा बचत गर्नुहोस् on मा क्लिक गर्नुहोस्।, विकल्प जुन अनुप्रयोगको मुख्य मेनूमा अवस्थित थियो।
हामी देख्न सक्छौं, छवि बाट वाटरमार्क हटाउन धेरै सरल छ र जटिल सम्पादन कार्यक्रम को आवश्यकता छैन, यदि तपाईंसँग यो कार्य गर्नका लागि अन्य तरिकाहरूको बारेमा कुनै सुझाव छ भने, हामी ती टिप्पणीहरूको माध्यमबाट प्राप्त गर्न पाउँदा खुसी हुनेछौं।
लेखको पूर्ण मार्ग: ग्याजेट समाचार » सामान्य » यी प्रोग्रामहरूका साथ फोटोबाट वाटरमार्क कसरी हटाउने